Meyi 29, 10:17
Abasebenzi beRosselkhoznadzor eMoscow, izifunda zaseMoscow naseTula bahlola izimoto eziyi-130 futhi bahlola amathani angaphezu kwamawaka ayizinkulungwane ezingama-2,1 amazambane amasha avela eAzerbaijan.
Yonke imikhiqizo ihlangabezana nezidingo zokuhlala zodwa. Ngemuva kokuqinisekiswa, amazambane akhishwe ngokuthengiswa kwamahhala.
Phambilini, iMoskva.ru ibike ukuthi ngaphezulu kwamathani angama-380 ama-cherries atholakele esifundeni saseMoscow ahlolwe yizisebenzi zeRosselkhoznadzor. Kuyaphawuleka ukuthi amajikijolo ahlangabezana nazo zonke izidingo ze-phytosanitary futhi aphephile ngokuphelele ukuwadla.